Ninka ISIS u qaabilsan bandhiga gowraca oo la sheegay inuu mar tegay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Warbaahinta reer Galbeedka ayaa sheegay in la ogaaday cidda uu yahay nin dhowr jeer oo hore kasoo muuqday Video Daacish soo dirtay oo muujinayey ajaanib qoorta laga jarayo.
Waxaa la aqoonsaday ninkaas wajigu u daboolan yahay, oo loo yaqaanno Jihadi John, oo lagu arkay isagoo middi wata Fiidiyoowyada ay soo daayaan Daacish ee dadka ay madaxa ka jaraan.
BBC, ayaa sheegtay iney fahamsantahay in magaciisa runta ah uu yahay Mohammed Emwazi. Wuxuu ka soo muuqday filimadii muujinayey dilal dhowr la hayste oo reer galbeed ahaa, waxaana ku jiray dadkaas James Foley oo American ah, Alan Henning oo ah shaqaale gargaar oo ingiriis ah, iyo saxafigii Japan ee Kenji Goto.
Waxaa la rumaysan yahay in Emwazi uu yahay Ingiriis ka yimid galbeedka London, asal ahaan kasoo jeeda dalka Carbeed ee Kuwait. Waxaa la aaminsan yahay in inuu tagey Somalia sanadkii 2006, uuna xiriir la leeyahay Al Shabaab.
Wargeyska The Washington Post ayaa warbixin uu ka qoray ninkaas ku sheegay in Emwazi uu ka baxay Jaamacadda West-minister ee London uuna ka bartay Computer Programing, isla markaana uu ahaa nin debci wanaagsan oo ay aad u jeclaayeen saaxibadiis.
Maxamed Emwazi ayaa sannadkii 2009-kii dhameeyay jaamacadda, iyadoo xilligaas ay isaga iyo laba nin oo saaxiibadiis ah oo mid yahay Jarmala ahaa magaciisana lagu sheegay Cumar iyo nin kale oo la yiraahdo Abu Talib ay ku aadeen safar dalka Tanzania, waase u suuro-geli wayday kaddib markii laga celiyay garoonka diyaaradaha; habeen kaddib ayaana dib loo tarxiilay.
Emwazi ayaa la sheegey inuu soo mareen magaalada Amestardam, waxaana uu sheegay in nin ka socda hay’adda Sirdoonka ee dalka Britain ee MI-5 uu su’aalo ku weydiiyay kuna eedeeyey inuu u socday Somalia si uu uga mid noqdo Al-shabaab. Emwazi ayaa diiday eedeyntaas, wuxuuna sheegey in MI-5 ay isku dayday inay shaqaaleysiiso oo ka dhigto Jaajuus, balse uu diiday.
Wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in Emwazi uu go’aansaday inuu dib ugu noqdo dalkiisii hooyo ee Kuwait, isagoo shaqo ka helay shirkad Kambiyuutarro, sida laga soo xigtay farriin E-mail uu u soo diray saaxiibkiis. Balse bishii June, 2010-kii ayaa hay’ad ka hortaga argagixisada oo saldhiggeedu yahay Britian u diiday inuu dib ugu noqdo dalkiisa.
Haras Rafiqi, oo ka tirsan hay’adda Quilliam Foundation oo fadhigeedu yahay London, ahna hay’ad cilmi baaris oo diirada saarta arrimaha Islaamka, waxaa uu sheegay in arrintan ay dharbaaxo ku tahay xiriirka ay jihaadoonayaashaas ay la leeyihiin shacabka.
Baarlamanka Soomaaliya oo raadinaya ciddi badeli laheyd xildhibaano dhawaan la dilay